တက္ကသိုလ်မသွားခင်လေး – Hlataw.com
ကျွန်တော် ဆယ်တန်းတုံးက ကျွန်တော့ကိုဂိုက်လုပ်ပေးတဲ့အစ်မဝမ်းကွဲတစ်ယောက်ရှိတယ်ဗျ၊ အိအိတဲ့ သူ့နာမည်က၊ သူက ကျတော့ထက် နှစ်နှစ်လောက်ကြီးတယ်။ တက္ကသိုလ်မသွားခင် စာကလည်းတော်တော့ ကျွန်တော့အမေက သူ့ကို ဂိုက်လုပ်ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းထားတာ။ သူတို့အိမ်ကလည်း ဘေးကပ်ရပ်ပဲဆိုတော့ ညဘက်အထိ စာကူလုပ်ပေးဖို့ အဆင်ပြေတာပေါ့။မအိက တစ်ဦးတည်းသောသမီးပါ။ ကျွန်တော့မှာတော့ ညီမလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ ၂ နှစ်ကွာပါတယ်။ ဖူးဖူးလို့ပဲ မှတ်ထားဗျာ။လောလာဆည်တော့မအိအကြောင်းအရင်ဆက်ပါမယ်။ အစ်မအိအိက လှတာတော့ သိပ်မလှဘူး ရွက်ကြမ်းရေချို ရုပ်ပဲ၊ ဒါမဲ့ ဘော်ဒီက မိုက်တယ် ခါးသေးသေးနဲ့ ရင်ဘက်ရော တင်သားရော အကိတ်ကြီးမဟုတ်ပေမယ့် လုံးပြီးကျစ်လစ်နေတာပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကို မအိလို့ခေါ်တယ်။ သူနဲ့ ကျွန်တော်တို့မောင်နှမနဲ့ ငယ်ငယ်တည်းက အတူတူ ကစားရင်း ကြီးလာတော့ ဟိုးအရင်ကနေ။
ခုအဖြစ်အပျက်မတိုင်ခင်အထိ သူ့အပေါ်မောင်နှမစိတ်ပဲရှိခဲ့ပါတယ် တစ်ဦးတည်းသော သားဆိုတော့ ကိုယ့်မောင်နှမရင်းတွေလိုပဲ သဘောထားခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ ကျတော် စာကြည့်ရတာတော့ ကိုယ့်အခန်းထဲကိုယ်ပဲ ဖီဖီနဲ့ မီမီက ညဘက်ဆို တီဗီ ကြည့်လေ့ရှိတော့ အသံတွေနဲ့ ကျတော် စာကြည့်တာအနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာဆိုးလို့ ကျတော့အခန်းထဲမာပဲ ကုတင်ပေါ်မှာ စားပွဲတင်ပြီးတော့ တံခါးကို အလုံပိတ်ပြီးသင်ရတယ်။ ညီမလေး ဖူးဖူးနဲ့က အခန်းချင်းကပ်ရပ်ပဲ ဆိုတော့ သူက စာအော်ကျက်ရင်လည်း မဆူအောင် တံခါးပိတ်ရင် လော့ခ်အမြဲချထားတက်တာ အကျင့်ပါသွားတယ်။ များသောအားဖြင့် ဂွင်းထုပြီး အိပ်ပျော်သွားတာနဲ့အိမ်စာတွေမလုပ်ဖြစ်ဖူး။ အဲ့တာကြောင့်ဆရာမက အိမ်ကို တိုင်တာနဲ့ မအိနဲ့ စာလုပ်ဖို့ဖြစ်လာတာ။ အခုလည်း မကြာခင် မအိရောက်လာရင် စာလုပ်ရတော့မယ်။ မအိမရောက်သေးခင် ကျွန်တော်ကလည်း သူငယ်ချင်းတွေဆီက ဖူးကားအသစ်တွေကူးလာတာကို ကြည့်ရင်း ဂွင်းထုနေတယ်။
အခန်းကလော့ချထားတော့ သူရောက်လာရင် တံခါးခေါက်မှရမယ်လေ။ အဲ့နေ့မှ မအိလည်း ဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ်မသိ အိမ်ထဲတန်းမဝင်ပဲ အိမ်ဘေးကို ပတ်ပြီး ပြတင်းပေါက်ကြားထဲကနေ ကျွန်တော့ကို စဖို့ ချောင်းတာနဲ့ ကွက်တိ ကျွန်တော်ဂွင်းထုနေတာ သူမြင်သွားတာပဲ အဲ့အဖြစ်အပျက်တွေက နောက်ပိုင်းသူပြန်ပြောပြလို့သိရတာပါ။ အစကတော့ မောင်လေး မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေ လုပ်နေတယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော့်ကို အလကားနေရင်း ဒေါသထွက်ပါသတဲ့ဗျာ။ ဒါမဲ့သူလည်း နေ့တိုင်းချောင်းတာပဲ ဂွင်းထုတဲ့နေ့နဲ့တိုးရင်တော့ မအိလည်း အဲ့နားတင်ပဲ ကြည့်ရင်း သူ့ဟာသူ ပွတ်ပေးရင်း ပြီးသွားတယ်တဲ့ စိတ်အာသာပြေသွားမှ မောင်နှမအချင်းချင်း ဆိုပြီး တွေးမိတဲ့သူ့ကိုယ်သူနောင်တရခဲ့ပေမယ့် မထိန်းနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာ။ အဲ့တာနဲ့ သူလည်း ထိန်းမနေတော့ပဲ ဝမ်းကွဲမောင်လေးနဲ့ အတွေ့အကြုံသစ်ကို စမ်းသပ်ဖို့အစပျိုးတော့တာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့တော့ ညဘက် စာပြဖို့မအိရောက်လာတော့ ပုံမှန်ထက်ကို ထူးခြားနေအောင်ဝတ်ထားတာ သတိပြုမိတယ်။ အကျီအဖြူ တီရှပ်လက်တိုနဲ့ အောက်က ပေါင်လောက်ရှိတဲ့ ဘောင်းဘီတိုနဲ့ပေါ့ အိမ်နေရင်းကိုဗျ။ ဒါမဲ့အမြဲသူ့ကြည့်လိုက်ရင် ထဘီနဲ့ပဲ မြင်ရတာများတယ်လေ။ “ဟာ… မအိ ပုံစံတွေဘာတွေ ပြောင်းနေပါလား ဘယ်ကပြန်လာတာလဲ” “ပူလို့ပါငါ့မောင်ရယ် မအိအပြင်ကို ဒီလိုပုံစံနဲ့မထွက်ရဲပါဘူး” ပြောလည်းပြောရင်း ကုတင်ပေါ်တက်ပြီး စားပွဲရှေ့ကို ထိုင်လိုက်တယ်။ “သင်္ချာအိမ်စာတွေပါတယ်ဆို ဘယ်မှာလဲ အစ်မကို ပြ” “ဟုတ် အဲ့တာပဲ လုပ်နေတာ ဒီအပုဒ်ကနေမတက်ဖူး ဖြစ်နေတယ် လုပ်ပါဦး” မအိက စားပွဲပေါ်ကိုတံတောင်နဲ့ထောက်ပြီး ကျွန်တော်တွက်နေတဲ့စာအုပ်ထဲကသခ်ျာပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ကို ရှင်းပြဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာ ဟ သွားတဲ့ အကျီင်္လည်ပင်းပေါက်ကနေ ရင်သားတစ်ဝက်ကို ရုတ်တရက်မြင်မိလိုက်တယ်။ ဟာ သူဘရာမဝတ်ထားဘူးဟ။
နို့လုံးလုံးလေးတွေကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတော့ စိတ်ထဲတစ်မျိုးတော့ဖြစ်သွားပေမယ့်မသင့်တော်ပါဘူးလေဆိုပြီး ငုံ့ပြီး ကိုယ့်စာအုပ်ကိုပြန်ကြည့်နေရင်း ထပ်မြင်ချင်စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့ ပြန်မော့ကြည့်မိပြန်တယ် စိတ်ထဲမှာတော့ မရိုးမရွ ဖြစ်လာနေပြီ။ အတွေးထဲမှာ ဗြောင်းဆန်နေပါတယ် ။ ငါကွာ စိတ်ထိန်းဟ စိတ်ထိန်း မင်းအစ်မနော် ။ အစ်မ နို့လေးတွေက လုံးနေတာပဲ ကွာ တောက် ။ သူကတော့ ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်နေတာ သတိမပြုမိဘူးထင်ပါတယ်။ ရှေ့ပိုတိုးလာပြီး ကျွန်တော် တွက်နေတဲ့ သင်္ချာစာအုပ်ကို ထောက်ပြရင်း ပုံသေနည်းကို ရှင်းပြနေရှာတယ်၊ ကျတော်ကတော့ စာနားထောင်သလိုလို သူ့မျက်နှာကြည့်လိုက် မျက်လုံးက အောက်ရောက်သွားလိုက်နဲ့ပေါ့ဗျာ။ ဒါမဲ့ကျတော်က သူ့ကို ငမ်းနေတာနဲ့စာက ခေါင်းထဲမရောက်တော့ဘူးလေ သူက မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှင်းရတာ အားမရတော့လို့ ထင်ပါရဲ့ ဘေးကပ်ရပ်ကို လာထိုင်တယ် ကျတော်ကလည်း ဘောင်းဘီတိုပါးပါးပဲ ဝတ်ထားတယ်လေ ပူတာကိုး။
သူက တမင်ခွေထိုင်လိုက်တော့ သူ့ပေါင်က ကျတော့ပေါင်ပေါ် လာတင်နေတယ် သူ့ဒူးခေါင်းနဲ့လည်း ကျတော့ ညီလေးနဲ့ နည်းနည်း ထိမိသွားတာပေါ့ အဲ့ဒီ့မှာ ညီလေးက နည်းနည်း ခေါင်းထောင်စပြုလာပြီ။ မအိက အနားနားကပ်ရှင်းပြတာကို မနည်းအာရုံစိုက်ရင်း ရှင်းသလိုလိုထင်ရတော့မှ ပုံစံတူပုစ္ဆာတစ်ခုက်ို ကိုယ့်ဘာသာကို ခက်ခက်ခဲခဲ တွက်နေတော့ ညီလေးက အာရုံပြောင်းပြီး ပြန်ငြိမ်သွားတယ်။ တွက်လို့လည်းပြီးရော သူက ကျတော်တွက်ထားတာကို စစ်နေတယ်။ သူ့ခြေထောက်ကလည်းငြိမ်ငြိမ်မနေဘူး ဒူးခေါင်းကို လှုပ်နေတယ် ကျတော့ပေါင်ပေါ်တင်ထားပြီး ညီလေးနဲ့ ထိနေတာ ကို သူကလှုပ်နေတော့ ဒီကောင် ဘယ်ခံနိုင်တော့မလဲဗျာ ညီလေးက ထောင်လာတော့တာပေါ့ မာမာကြီး သူ့ပေါင်ကို ထိုးမိနေတာ သူသိမှာပေါ့။ “ဟဲ့” ဆိုပြီး လှုပ်နေတာက ငြိမ်သွားတယ်။ ပြီးတော့မှ သူ့ဘောပင်နဲ့ ကျွန်တော့ ခေါင်းကို ခေါက်ပြီး “စောက်ကောင်လေး ဘာတွေတွေးနေတာလည်း နင့်ဟာကဖောင်နေပြီ” ဆိုပြီး။
သူ့နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက်လိုက်သေးတယ် “မအိက ကျွန်တော့ ပေါ်ပေါ်ဒူးခေါင်းလာတင်ပြီး လှုပ်နေတာကိုး” “အဲ့တာနဲ့ပဲ မာစရာလား ကို့အစ်မ ပေါင်ပဲကို၊ တက်ထိုင်ရင်တောင် ဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး” “ဒါဆို မအိတက်ထိုင်ကြည့်ပါလား” ကျတော်က ရွဲ့ပြောလိုက်တာပါ။ သူက ဖောင်းနေတဲ့နေရာကနေ မျက်နှာမလွှဲပဲ “အေး ထိုင်မယ်ဟာ” ဆိုပြီး ကျွန်တော်နဲ့ ရှေ့စားပွဲကြားထဲဝင်လာတော့ နည်းနည်း နောက်ဆုပ်ပေးလိုက်ရတယ်။ သူတင်ပါးကလည်း တော်တော်တင်းတာပဲ အခုမှသတိထားမိတယ်။ ဘောင်းဘီတိုလေးမှာ တင်နှစ်လုံးက ဖောင်းလို့ပေါ့။ မအိကနောက်ကို တစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီး ပြုံးစ်ိစိနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်းထိုင်ချလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့ဟာက အချောင်းလိုက် သူ့ဖင်ကြားမှာ ကွက်တိ ညပ်နေတယ်။ သူ့ဖင်လုံးလေးက နွေးနေတာကို ခံစားလိုက်ရတော့ “အာ့” ဆိုပြီး သူ့ခါးလေးကို ကိုင်ထားမိတယ်။်”ဘာဖြစ်တာလဲမောင်လေး , မအိ ဝိတ်ကိုတောင်မနိုင်ဘူးလား”။
မဟုတ်ပါဘူး နိုင်ပါတယ် ဒီတိုင်းပဲထိုင်နေဆိုပြီး ပြန်ထမှာကြောက်လို့ ခါးကနေ ဆွဲကပ်ထားမိတယ်လေ။ လူလည်းကတုန်ကယင်နဲ့ ရင်ဘက်ထဲမှာလည်း တဒိန်းဒိန်းနဲ့ သူ့ခါးသိမ်သိမ်လေးကို ဖက်ထားမိတယ်။ မအိက အဲ့အတိုင်းနေပြီး ခုန ကျွန်တော်တွက်ထားတဲ့ပုစ္ဆာကို အချိန်ဆွဲ ပြီး စစ်နေပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ လှုပ်ရမယ့်သူက ကျတော်ပေါ့ ကျွန်တော်လည်း အရဲစွန့်ပြီးနောက်ကနေ သူ့ခါးကို ဖက်ထားရင်း အောက်ကလည်း လှုပ်စိလှုပ်စိနဲ့ ညှောင့်နေတယ်။ မအိက ဘာမှမပြောဘူး သူလည်း ဖြစ်ချင်နေတဲ့ပုံပေါ်နေတော့ မအိမှဟုတ်ရဲ့လားလို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တောင်မယုံနိုင်ပါဘူး။ လက်ကလည်း တဖြည်းဖြည်း အပေါ်တက်ပြီး သူ့နို့ နှစ်လုံး စလုံးကို အပြင်က အုပ်ပြီးညှစ်လိုက်တယ်။ မအိ ညည်းသံလေးတွေပါထွက်လာတယ်။ သူလည်းဖင်ကို တလှုပ်လှုပ် လုပ်ရင်း သူ့အကျီင်္ကို ဆွဲလှန်ပေးတယ်။ အရမ်းကို ကိုင်ချင်နေတဲ့နို့လေးတွေကို ညှစ်နေလိုက်တယ်။
နို့ညှစ်ရင်းညှောင့်နေတာ နည်းနည်းကြာလာတော့ မအိလည်း စားပွဲကို ကိုင်ရင်း ဖင်လေးနဲနဲကြွပြီး ပြန်ဆောင့်ချလာတယ်။ အထဲမထည့်သေးပဲ အဝတ်ပါးပါးတွေခံထားပြီး ပွတ်နေတာ လုံးဝဖီးလ်ပဲ။ ရုတ်တရက် အစ်မဝမ်းကွဲကို လုပ်နေတာပါလားဆိုပြီး သတိဝင်လာတော့ ကျွန်တော်ရပ်လိုက်ပေမယ့် မအိက ဆက်ဆောင့်နေတုံး။ သူ့ဘောင်းဘီကိုကြည့်လိုက်တော့ အရည်စိုကွက်လေးတွေ့နေရတယ် သူတော်တော် အရှိန်တက်နေပြီ။ “မအိ ကျွန်တော်တို့က မောင်နှမတွေလေ ဒီလို လုပ်လို့မကောင်းဘူးနော်” မအိက ခပ်တိုးတိုးပဲ ဖီးတက်နေသလိုလို မောနေသလိုလိုလေသံလေးနဲ့ “ဝမ်းကွဲတွေပဲကို ထားပါ အဲ့တာနောက်မှတွေးမယ် မောင်လေး မအိကိုလုပ်တော့ကွာ” ကျွန်တော် မအိဘောင်းဘီမျော့ကြိုးကို ကိုင်ရင်းအောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲချလိုက်တယ်။ မောင်နှမဝမ်းကွဲချင်း မလုပ်သင့်ဘူးလို့သိပေမယ့် ခုချိန်မှာတော့ သူရော ကျွန်တော်ရော ထိန်းလို့ရမယ့် ပုံမပေါ်တော့ပါဘူး။
သူက ကျွန်တော့အပေါ် ထိုင်နေတုံးမို့ အကျွတ်ချွတ်ပစ်လို့မရတာနဲ့သူ့ဘောင်းဘီကို ပေါင်လည်တင်ရပ်ထားလိုက်ရတယ်။ သူအကျီင်္ကို သူ့ဘာသာသူ ချွတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း အကျီင်္ ချွတ်ပြီးတော့ အောက်ကနေ ခါးကိုကော့ပြိ်း ဘောင်းဘီကို ချွတ်ရတာပေါ့။ မအိ စဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ မာတောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့လီးနဲ့ အသားချင်းထိမိသွားပါပြီ မအိဖင်ကို ဘယ်လက်နဲ့ကိုင်ပြီး မြှောက်ထားရင်း ကျွန်တော့လီးကို ညာလက်နဲ့ကိုင်ပြီးတော့ အရည်လေးတွေနဲ့ရွဲနေပြီး ပူနွေးနေတဲ့ မအိ စဖုတ်လေးထဲကို ထိုးထည့်လိုက်တော့တယ် မအိက အာ့ခနဲ့ အသံထွက်သွားပြိ်း မအော်မိအောင် ခုနသူစစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့စာအုပ်ကို ပါးစပ်က ကိုက်ထားတာပေါ့။ ကျွန်တော်ကလည်း အောက်ကနေ ပင့်လိုးပေးပေါ့ဗျာ။ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် အဲ့တိုင်း လိုးနေကြတာ ညည်းသံကလွဲလို့ တစ်ယောက်မှ စကားမပြောမိကြပါဘူး။ ကျွန်တော်အောက်ကနေပင့်ဆောင့်နေရင်း တအားကောင်းလာတာနဲ့ ပြီးသွားမှာကြောက်လို့။
ရုတ်တရက်ထလိုက်ပြီး မအိစဖုတ်ထဲကို အဆုံးသွင်းပြီးတော့ တအားကပ်ထားလိုက်တယ် မအိကတော့ပြီးသွားတဲ့ပုံပဲ တစ်ကိုယ်လုံးတုံပြီး ညည်းသံတွေထွက်လာတယ်။ မအိစဖုတ်ထဲက ကျွန်တော့လီးလည်း ခုနထက်နည်းနည်းပိုနွေးသွားတာ ခံစားလိုက်ရတယ်။ အခု ကျွန်တော် အောက်က ရုတ်တရပ် ထပြီး တအားကပ်လိုက်တော့ မအိက စားပွဲပေါ်မှာမှောက်ခုံ ကျွန်တော်ကနောက်ကနေ ထည့်ထားသလိုကွက်တိပေါ့ဗျာ။ မအိတုန်နေတာ ငြိမ်သွားပြီး အသက်ရှုသံတွေနှေးသွားတဲ့ထိ စားပွဲပေါ်မှောက်အိပ်နေတဲ့သူ့အပေါ် ထပ်ထားရင်းကျွန်တော့ဟာကို ဖြည်းဖြည်းချင်းအသွင်းအထုတ်လုပ်နေတယ် သူငြိမ်သွားတော့ ကျွန်တော့ဟာဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး မအိကို ကုတင်ပေါ် ပက်လက်လှဲချလိုက်ရင်း ဘောင်းဘီကို ကွင်းလုံးဆွဲချွတ်လိုက်တယ်။ မအိ ပေါင်ကိုကားပြီး ကျွန်တော့လီးကိုပြန်ထည့် ချောကနဲ့ဝင်သွားတာနဲ့ တဖုန်းဖုန်းနဲ့ လိုးတော့တာပဲ။ မအိကတော့အောက်ကနေ အင်းအင်းနဲ့ညည်းရင်း ဖက်ထားတာပေါ့။
ကျွန်တော် မအိမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးမလိုးရဲဘူးဗျ။ ရှိန်နေသလိုလို တစ်ချိန်လုံး ကို့အစ်မအနေနဲ့ မြင်ခဲ့သူကို ခုမှ လိုးနေရတော့ တစ်မျိုးကြီးပေါ့။ မအိလည်းလိုးနေတဲ့တစ်ချိန်လုံး မျက်နှာတစ်ဖက်ကိုလှည့်ထားတယ် လူကိုတော့ တင်းကျပ်နေအောင်ဖက်ထားပါတယ်။ အချက်သုံးဆယ်လောက်ဆောင့်သွင်းပြီးတော့ မအိ စဖုတ်အထဲက ပြန်ညှစ်တာနဲ့ အရမ်းကောင်းလာပြီး ဆွဲထုတ်ရင်း အပြင်မှာပြီးသွားပါတယ်။ မအိပေါင်ပေါ်ကျသွားတာပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်လုံး ဒီတိုင်းပက်လက်လှဲနေရင်း ဘာစကားမှမပြောပဲ မောနေတဲ့အသံပဲထွက်နေတယ်။ ခဏနေတော့မှ သူအိပ်ယာပေါ်က လူလဲထလိုက်ရင်း သူ့ဘောင်းဘီကို ပြန်ဆွဲဝတ်လိုက်ပြီး “မအိ ရေသွားဆေးလိုက်ဦးမယ် ပြီးတော့မှထွက်ခဲ့နော် အိမ်က ရိပ်မိသွားဦးမယ်” ဆိုပြီး ထွက်သွားပါတယ်။ ဒီအချိန်ရောက်မှတော့ကျွန်တော် မယုံနိုင်လို့မရတော့ပါဘူး မအိ နဲ့ကျွန်တော် လွန်ကြူးမိခဲ့ကြပါပြီ။
နောင်တရသလိုလိုဖြစ်မိပေမယ့် စိတ်ထဲ တစ်မျိုးတမည် သဘောကျမိပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အခန်းထဲ ရှင်းစရာရှိတာရှင်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်လုပ်ပြီးတော့မှအပြင်ထွက်လာခဲ့တယ်။ အပြင်မှာ မီးတွေတောင်ပိတ်နေပြီအကုန်အိပ်ကုန်ကြပြီပဲ။ ရေချိုးခန်းမီးလင်းနေတာနဲ့ တံခါးခေါက်လိုက်တယ် “မောင်လေးလား ဝင်ခဲ့လေ” အထဲရောက်တော့ မအိတစ်ကိုယ်လုံးအဝတ်အစားမရှိ ဗလာအတိုင်းရေချိုးနေတယ်။ ကျွန်တော်ညီလေးလည်း မအိရဲ့ သေးသွယ်သွယ်ခါးလေးနဲ့ လုံးတစ်နေတဲ့ တင်ပါးလေးကိုမြင်တော့ တစ်ခါပြန်နိုးလာတာပေါ့။ မအိက ကျွန်တော့ကို ရီပြရင်း “ငါ့မောင်ကအတော်သန်တာပဲ ပြန်တောင်ထလာပြီ ဘောင်းဘီကို ဖောင်းနေတာပဲ” “မအိက အရမ်းလှတာကိုး” “နောက်မှ လုပ်မယ် အခုတော့ မအိနဲ့တူတူချိုးရမယ် ချွတ်” ကျတော်လည်း အကုန်ချွတ်လိုက်ပြီး မအိနဲ့အတူရေပန်းအောက်ဝင်လိုက်တယ်။ အနောက်ကနေ ဖက်ထားရင်း မအိဖင်လုံးလုံးလေးကြားထဲ ညီတော်မောင်ကို ညှပ်ထားရင်း နို့နှစ်လုံးစလုံးကို ညှစ်နေတယ်။
နို့သီးခေါင်းသေးသေးလေးတွေချေပေးတော့မအိက မျက်နှာချင်းဆိုင်လှည့်လာပြီး ကျွန်တော့ဟာကို ကိုင်ရင်း သူ့အဖုတ်နဲ့ တေ့ပေးနေပါလေရော။ ကျွန်တော်လည်းမအိကို နံရံမှာကပ်ထားရင်းကိုယ်ကို အောက်နည်းနည်းနိမ့်ပြီး သူ့စဖုတ်ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်တာ လျောခနဲ့ဝင်သွားတယ်ဗျာ။ မအိနဲ့ကျွန်တော် အခုတော့ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ရင်း မက်တပ်ဆော်နေတာ။ မအိနှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတွေကို ကစ်ဆင်ဆွဲလိုက်တော့ သူကလည်းပြန်ဆွဲဆုပ်တယ်။ “မအိ ဟိုဘက်လှည်ပြီး နံရံကို လက်နဲ့ထောက်ပေးပါလား။ အနောက်က နေလုပ်ချင်လို့။” “အင်း..အင်း” ကျွန်တော့လီးကိုသူ့ ထဲက စွက် ကနဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ဟိုးဘက်လှည့်ပြီး ကုန်းပေးတော့ ပြောင်တင်းနေတဲ့ ဖင်လေးနှစ်လုံးကြားထဲက ပြူထွက်နေတဲ့ စဖုတ် ဖောင်းဖောင်းလေးထဲ ထိုးထည့်လိုက်ပြီး အဆုံးထိ ရောက်အောင်ဆောင့်ထည့်လိုက်တယ်။ “အာ့…..မောင်လေးရယ်…အောင့်သွားတာပဲ ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါ”။
“ဆောရီးဗျာ…ကျွန်တော် စိတ်လောသွားလို့” ထိန်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းထုတ်လိုက်သွင်းလိုက် လုပ်နေရင်း မအိညည်းသံအလိုက်အရှိန်မြှင့်ပြီး လိုးနေတော့တယ်။ မအိအော်သံတွေလည်း ကျယ်လာတာနဲ့ နို့ နှစ်ဖက်ကို ညှစ်ထားရင်း အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့အချက်သုံးဆယ်လောက် ဆောင့်သွင်းပြီးတော့ “အာ့…အာ့……မောင်လေး…မအိ…ပြီးပြီ…ပြီးပြီ…အား.” ဆိုပြီး ရှေ့က နံရံကို မှီလျက်အားလျော့သွားပြီး မောနေတယ်။ သူ့စဖုတ်ထဲက ထွက်လာတဲ့ ကျွန်တော့ ညီလေးကတော့ မအိစောက်ရည်လေးတွေနဲ့ပြောင်လက်နေတာပေါ့။ မအိ ကို လက်မောင်းနှစ်ဖက်က ကိုင်းရင်းဆွဲထူပြီး ကစ်ဆင်ဆွဲပြီးတော့ “ကျွန်တော်မပြီးသေးဘူးမအိ စုပ်ပေးပါလား” သူက “ပြီးရောလေ လာရှေ့တိုး” ဆိုပြီး ရေချိုးခန်း ကြွေခင်းပေါ်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ ကျွန်တော့လီးကို ကိုင်ပြီး သူ့ပါးစပ်နဲ့ငုံလိုက်ရင်း ရှေ့တိုးနောက်ဆုပ် လုပ်ပီး စုပ်ပေးနေတယ်။ “ပြွတ်…ပြွစ်…ပြွတ်..” ကျွန်တော်လည်း နေလို့ကောင်းတာနဲ့။
ခေါင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်ပြီး ပါးစပ်ထဲ စောင့်ထိုးရင်း လိုးနေမိတယ် “ပြွစ်….ဗြွက်….ဗလွက်…” မအိ မစုပ်နိုင်လည်းဂရုမစိုက်တော့ဘူး ကောင်းနေတာ မရပ်ချင်တော့တာနဲ့ မအိပါးစပ်က အမြုတ်ထွက်လာတဲ့ထိ ဆက်တိုက်လိုးနေတာပေါ့ “ဗလွက်….ဗွက်…..အု….ဝု….အော့….အာ့…” မအိကအတင်းဆွဲခွာပေမယ့် မလွှတ်ပေးပါဘူး ခေါင်းကို ဖိကပ်ထားရင်း ဆက်လုပ်နေတာ မအိမျက်နှာတွေနီရဲပြီး လည်ပင်းကြောတွေပါ ထောင်လာတယ်။ ကျွန်တော့ပေါင်တွေကို တဖြောင်းဖြောင်းရိုက်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ပြီးချင်နေပြီမို့ အာခေါင်ထဲထိ တဆုံးသွင်းရင်း လွှတ်ထည့်လိုက်တော့တယ်။ ပါးစပ်ထဲက သွားရည်တွေရော လရည်တွေပါထွက်ကျလာပြီးတော့ နံရံမှာမှီပြီး အသက်လုရှုနေတယ်။ ပါးစပ်ဟပြီး ရှူနေရင်း နှုတ်ခမ်းစပ်က သုတ်ရည်တွေစီးကျလို့ပေါ့။ ကျွန်တော်လည်း ထိုင်ချလိုက်ပြီး မအိနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်နံရံကို မှီရင်း သူ့ကိုကြည့်နေတယ် စိတ်ထဲတော့ “ငါ လွန်များလွန်သွားသလို့ပေါ” လုပ်ချင်ရာလုပ်ပီး ခုမှ ခပ်လန့်လန့်ရယ်။
မအိက အသက်ရှူ ဝမှ သုတ်တွေ ထွေး ထုတ်လိုက်ပြီး ပလုတ်ကျင်းရင်း “ဖွီ မောင်လေးက အရမ်းကြမ်းတာပဲ တော်ပြီနောက်တစ်ခါ မစုပ်ပေးတော့ဘူး” “တောင်းပန်ပါတယ် မအိရယ် အမစုပ်ပေးတာ အရမ်းကောင်းတာကိုး ဟီး” မအိက မျက်စောင်းထိုးကြည့်လိုက်ပြီး “အေးပါ နင်တွေ့မယ်ကြည့်ထား” ဆိုပြီး ထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော့ခေါင်းကိုကိုင်ပြီး သူ့ပေါင်ကြားကို တအားကပ်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ရုပ်တရက်ကြောင်သွားပြီး နောက်က မအိဖင်နှစ်လုံးကို ညှစ်ထားမိတယ်။ နောက်ပြီးမှ လျာထုတ်ပြီး မအိစဖုတ် အကွဲကြောင်းလေးကို လျာထိုးထည့်ရင်း လျက်တက်သလို လျက်ပါတော့တယ်။ မအိက ခါးကော့လိုက် တွန့်လိမ်လိုက်နဲ့ ကျွန်တော့မျက်နှာကို ပွတ်နေတော့တာ။ ကျွန်တော်လည်း မအိဖင်ကို ညှစ်ရင်းလက်တစ်ဖက်က သူ့ဖင်ပေါက်လေးကိုပါ ပွတ်ပေးလိုက်တော့ တွန့်ကနဲ့ဖြစ်သွားပြီး အား..ဆိုတဲ့ ဖီးသံထွက်လာပါတယ် အဲ့တာနဲ့ အထာသိသွားတာနဲ့ လက်ကိုမအိဖင်ကြား ပွတ်ရင်း တအားစုပ်ပေးလိုက်တာ။
သူတအားအားအော်ပြ်ီး နောက်တစ်ခါ ထပ်ပြီးသွားပါတယ်… ကျွန်တော့ပါးမှာပေနေတဲ့ မအိအရည်တွေကို ဆေးနေတော့ သူက တံပတ်နဲ့ရေတောင်သုတ်နေပြီ။ ကျွန်တော်လည်း တပတ်ယူ သုတ်လိုက်ပြီး အဝတ်အစားတွေပြန်ဝတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့နေ့ည မအိ တစ်ညလုံး ကျတော်နဲ့ ပုံစံတွေစုံအောင်လိုးရင်း မိုးလင်းခါနီးမှ သူ့အိမ်ကိုသူပြန်သွားတာပေါ့ဗျာ။ နောက်နေ့ကျတော့ ကျွန်တော်ကျောင်းမသွားနိုင်ဘူး သုံးနာရီလောက်ပဲအိပ်ရသေးတယ် အခန်းတံခါးလာခေါက်တာနဲ့ အမေ့ကို နေမကောင်းဘူး အကြောင်းပြပြီး ဆက်အိပ်ဖို့ပြင်နေတယ်။ အမေကတော့ ဆေးသောက်စရာပေးခဲ့ပြီး ဈေးသွားတော့တာပေါ့။ ဒီအချိန်ကပုံမှန်ဆို ဖူးဖူးနဲ့အတူကျောင်းသွားနေကြပါ။ သူလည်း သွားဖို့ပြင်ဆင်နေလောက်ပြီ။ ညီမလေးဖူးဖူးက ရှစ်တန်း ကျွန်တော်က ဆယ်တန်းပါ။ ဖူးဖူးအကြောင်းပြောရဦးမယ်။ သူက ကျွန်တော်နဲ့မတူဘူး စာတော့တော်တယ်။
ဒါပေမယ့် နည်းနည်း ခပ်စွာစွာ ခပ်ရွရွဆိုတော့ သူ့နားကပ်ချင်တဲ့ကောင်လည်းများသလို ကပ်လည်းမကပ်ရဲကြဘူးပေါ့။ ဒါတောင်အရဲစွန့်ပြီးကပ်ကြသေးတယ် သူ့ကို စာလိုက်ပေးတာတွေ့လို့ ကျွန်တော် သူ့အခန်ထဲက ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုကို နရင်းရိုက်လွှတ်လို့ သူ့အမေကတိုင်တာနဲ့ရုံးခန်းရောက်တာမျိုးက ခဏခဏဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ အခုတော့ သူတို့ကစာမေးပွဲ ပြီးလို့ကျောင်းပိတ်ထားတာနဲ့ ငြိမ်နေတာပဲ။ ပြောသာပြောတာဗျ သူကလည်း ရှစ်တန်းသာဆိုတယ် ကြွေတဲ့ကောင်တွေလည်းကြွေလောက်တယ်။ ကိုယ့်ညီမ မို့မြှောက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ရင်အုပ်က သူ့အရွယ်အတွက် တော်တော် ကိတ်တယ် ကြည့်ရဆိုးအောင်အကြီးကြီးမဟုတ်ဖူး ကိတ်ရုံတင်ပါ။ ခါးလည်းသေးသေးလေးနဲ့ တင်ပါးကတော့အထူးခြားဆုံးပဲ ဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ မက်တပ်ရပ်လိုက်ရင်နောက်ကို ကော့နေသေးတယ်။ ဖူးဖူးနဲ့ မောင်နှမသာမတော်ရင် ကျွန်တော်လည်း ရည်းစားစကားပြောမိမှာ အမှန်ပဲ။
အမေဈေးကိုထွက်သွားတော့ အခန်ထဲပြန်ဝင်လာတယ်။ ခဏလှဲပြီး ထမင်းစားဦးမှ ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ တံခါးလော့မချခဲ့ဘူး။ အိပ်ယာပေါ်လှဲချပြီး ညတုန်းက အစ်မဝမ်းကွဲ မအိနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေပြန်တွေးမိတော့ ညီလေးက ထောင်လာပါတယ်။ ပုဆိုးကို ဆွဲချွတ်ပြီး အိပ်ယာပေါ်မှာ ပက်လက်လှဲရင်း ဂွင်းတိုက်နေတာပေါ့။ ရုတ်တရက် ဂျလောက်ဆိုတဲ့တံခါးဖွင့်သံကြားတော့ စောင်နဲ့အုပ်ပြီး အိပ်ချင်ရောင်ဆောင်နေလိုက်တယ်။ ဘယ်သူများဝင်လာပါလိမ့်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပေါ့။ “ကိုကို ကျောင်းသွားမယ်လေ…” ဖူးဖူးပဲ အမေသူ့ကို မပြောခဲ့ဘူးလားမသိဘူး မထပဲအိပ်နေသယောင်ဟန်ဆောင်ရင် သူ့ဘာသာသူ ထွက်သွားမယ်ထင်တယ်။ ကျွန်တော်က ငြိမ်နေတော့ ဖူးဖူးက ကုတင်ဘေးရောက်လာပြီး နိုးတယ်။ “ကိုကို ထတော့လေ…အယ်” ဖူးဖူးကနိုးရင်း အံသြသံထွက်လာတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သတိထားကြည့်တော့မှ အောက်က ကောင်က စောင်အပါးလေးဆိုတော့ ဖောင်းထနေတာ သိသိသာသာပဲ။
ကွိုင်ပဲဟ ဆိုပြီးသူဘာလုပ်မလဲသိချင်လို့ ငြိမ်နေလိုက်တယ်… ဖူးဖူးက ဖောင်းနေတဲ့နေရာကို အပေါ်ကနေ လက်နဲ့ကိုင်ကြည့်နေတယ်။ နည်းနည်းလန့်သွားတာပေါ့ စိတ်ထဲမှာ ဒီကောင်မလေး ဘာစိတ်ကူးထပေါက်တာလဲဟဆိုပြီး ဖြစ်နေတယ်။ ဖူးဖူးစောင်ကိုလှန်ချလိုက်တော့ ကျွန်တော့ဟာကငေါက်ကနဲ့ထောင်ထလာတယ်။ “ဟယ်…ခိခိ” ဆိုတဲ့ ဖူးဖူးရဲ့ရီသံတိုးတိုးလေး ကြားလိုင်ရပြီး ထ ထွက်သွားတဲ့ လမ်းလျောက်သံလည်းကြားလိုက်ရတယ်။ ပြန်ထွက်သွားပြီထင်ပေမယ့် မဟုတ်ပါဘူး သူက တံခါးပိတ်ပြီး လောခ်ပါ ချလိုက်သေးတယ်။ ဟ သောက်ပြသနာပဲ ထလိုက်ရင်ကောင်းမလား။ ငြိမ်နေလိုက်ပါဦးမယ်လေ ဆိုပြီး အိပ်ချင်ယောင်ဆက်ဆောင်နေတယ်။ သူက ထောင်နေတဲ့ကျွန်တော့လီးကို ကိုင်ရင်း သူ့လက်ကလေးနဲ့ ဖွဖွလေးပွတ်နေတယ်။ ညီမအရင်းဆိုတော့ စိတ်က လက်မခံပေမယ့် အောက်က ကောင်ကအထိအတွေ့ကြောင့်အကြောတွေပါထောင်ထလာတယ်။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တောင်မယုံနိုင်အောင်ပါပဲ ခဏပွတ်ပေးရင်း ဖူးဖူးက ရုတ်တရက် မျက်နှာနဲ့ကပ်လိုက်ပြီး လျာထိပ်နဲ့လာတို့နေတယ်။ ပြီးတော့ ထိပ်ပိုင်းကို ငုံလိုက်တာ ခံစားသိလိုက်တယ်။ တဖြည်းဖြည်း ရေခဲချောင်းစုပ်သလို စုပ်ရင်း တစ်ဝက်ထိ ဆွဲဆွဲ စုပ်နေတယ်။ က်ို့ညီမအရင်းက လီးလာစုပ်နေတော့ တစ်မျိုးကြီးခံစားနေရပေမယ့် ဖူးဖူးရဲ့ ပါးစပ်အထိအတွေ့ကြောင့် စိတ်တွေက ပြန်ထ လာတယ်။ မောင်နှမအရင်းကြီး ဖြစ်ပါ့မလားတွေးမိပြီး စဉ်းစားရကြပ်နေတုံး ဖူးဖူးးက ကုတင်ပေါ်တက်လာပြီး ဘေးက အိပ်ယာနေရာလွတ်မှာ လှဲလိုက်တာ သိလိုက်ရတယ်။ ပြီးတော့ မျက်နှာနားကပ်လာတာက်ို သူမအသက်ရှုသံတွေက မျက်နှာလာရိုက်နေတာကတဆင့်ခံစားသိလိုက်တယ်။ အောက်က ကျွန်တော့ လီးကို သူ့လက်ကလေးနဲ့ပြန်ကိုင်ပြီး ကျွန်တော့နှုတ်ခမ်းကို လျာနဲ့လာ သပ်နေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စိတ်က ထိန်းမရတော့ပဲ လန့်နိုးသလိုလိုနဲ့ မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့။
သူ့လက်လည်း ပြန်ရုပ်သွားပြီး “ဟာ…ကိုကို” ဆိုပြီး ကုတင်ပေါ်က ထ ဖို့ပြင်တယ် ကျွန်တော်က သူ့ကို “မထနဲ့” ဆိုပြီး ချုပ်ထားတာပေါ့။ ပက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ သူ့အပေါ် ပြန်တက်လိုက်တယ်။ နို့အုံဖောင်းဖောင်းနဲ့ ရင်ဘက်လေးတွေကို ဖိကပ်ထားရင်း ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို သူ့ပေါင်ပေါ်တင်လိုက်တော့ သူက ခြေထောက်လေးကားသွားပါတယ်။ သူ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကြားထဲဝင်သွားပြီး ကျွန်တော့လီးနဲ့ သူ့ ပိပိလေးနဲ့ ကွက်တိ ထောက်ထားတာပေါ့။ သူနဲ့ကျွန်တော် မျက်နှာချင်းကပ်နေကြတာ အသက်ရှုထုတ်လိုက်တဲ့လေကိုတောင် ခံစားနေရတယ်။ သူလည်း အသက်ရှုသံတွေမြန်လာသလိုပဲ။ “ကိုကြီး ဘယ်တည်းက နိုးနေတာလည်း” “နင်ဝင်လာတည်းကပဲ….ညီမလေးရဲ့” သူ့လက်တစ်ဖက်ကိုလည်း အပေါ်ကဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်ပြီး သူနဲ့ မျက်လုံးချင်းဆုံနေလိုက်တယ်။ သူလည်းပါးစပ်လေးဟပြီး ကြည့်နေတယ် ပြီးမှ ကျွန်တော်က “ဖူးဖူး ညီမလေး ငါနင့်အကိုဆိုတာ သတိထားပါဦး ဘာစိတ်တွေဖြစ်နေတာလည်း”။
“ကိုကို့ ကို ကျောင်းသွားဖို့ လာခေါ်တာပဲ အထဲရောက်မှ ကိုကို့ဟာကြီး ထောင်နေတာတွေ့တာနဲ့ ညီမလေး စိတ်တွေ ယားလာလို့” “နင့်ကိုငါက အဲ့လိုစိတ်တွေမရှိဘူး အဖြူထည်လေးထင်တာ အထူသဖြင့်မောင်နှမချင်းကြားမှာပေါ့” “ကိုကို လည်းဘာထူးလို့လည်း မအိနဲ့ မနေ့ညက ဖြစ်ကြတာများ မြင်မကောင်းဘူး” “ဟာ..နင်က ဘယ်လိုသိတာလည်း” “ညီမလေး ကိုကို့ကို နေ့တိုင်းချောင်းနေတာ အနောက်ဘက်က ပတ်ပြီး ကိုကို့အခန်း ပြတင်းပေါက်က ချောင်းတာပေါ့” ဟုတ်သားပဲ ကျွန်တော့အခန်းပြတင်းပေါက်က ရောင်ပြန်မှနိတွေကာထားတာပါ မနက်ဆို အပြင်က အထဲကို မမြင်နိုင်ပေမယ့် ညဆို အခန်းထဲမီးလင်းနေရင် အပြက်က ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ရတယ်လေ။ “ညီမလေး ကိုကိုနဲ့ မအိနဲ့ ဖြစ်တာကို ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောနဲ့နော်” “ဟင်းဟင်း.. ညီမလေးကို ပျော်အောင်ထားရင် မပြောပါဘူး ဘယ်သူမှ” “ညီမလေးကို ဘယ်လိုပျော်အောင်လုပ်ပေးရမလဲ” မေးလိုက်တော့ သူက ပြုံးနေရင်းက။
မျက်နှာနား နှုတ်ခမ်းလေး စူပြီး ကပ်လာတော့သူ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို ပြွတ်ဆိုပြီး တစ်ချက်နမ်းလိုက်တယ်။ သူ့နှလုံးခုန်သံတွေ တဒုတ်ဒုတ်နဲ့ မြန်လာတာကို ရင်ဘက်ချင်း ကပ်နေတော့ ခံစားသိနဲ့ သိနေတယ်။အစက သူပျော်ပါစေဆိုပြီး ထိရုံနမ်းလိုက်ပေမယ့် ဖူးဖူးရဲ့ ရမ္မက်ပါတဲ့အနမ်းတွေက နှုတ်ခမ်း တစ်ခုလုံး ဆွဲစုပ်လာပြီး သူ့လျာလေးပါ ပါးစပ်ထဲ ဝင်လာတယ်။ ဖူးဖူးရဲ့ လျာလေးကို ဆွဲစုပ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့လျာလည်း ပြန်သွင်းရင်း မောင်နှမနှစ်ယောက် ကုတင်ပေါ်မှာ ထပ်ရပ်အနမ်းချင်း ဖလှယ်နေတော့တယ်။ ဖူးဖူးက အောက်ကနမ်းရင်း ကျွန်တော့ ပုဆိုးကို ဖက်ထားရင်း နောက်ကနေ ဆွဲချနေတာ သိရတော့ မောင်နှမရင်းဆိုတဲ့အသိပြန်ဝင်လာတာနဲ့ ခွာလိုက်ပြီး “ဖူးဖူး ကိုကိုက ညီမလေးရဲ့ အစ်ကို အရင်းလေ ဒီလို ဖြစ်ချင်တာ သေချာရဲ့လား” “မသိဘူးကွာ ညီမလေး ကိုကို့ကို ချစ်နေတာ ကြာပြီ….ကိုကိုနဲ့ ညီမလေးက စိတ်ကူးထဲမှာ လင်မယားတွေလိုတောင်ဖြစ်နေကြပြီ။
ညီမလေးဖြစ်ချင်တာ သိပ်သေချာတာပေါ့” ဖူးဖူးရဲ့ ရမ္မက်ဆန်ဆန် စကားသံတွေကြောင့် ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်ညီမအရင်းပေါ်ကို စိတ်သာယာသလိုလိုဖြစ်လာပါတယ်။ အောက်က သူ့ဟာလေးကို ကပ်ပြီးဖြေးဖြေးချင်း ဖိကြိတ်နေမိတယ်လေ။ “ညီမလေး ဘယ်ချိန်တည်းက ကိုကို့အပေါ် ဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတာလည်း” “ကိုကိုက ညီမလေးအပေါ်အရမ်းကောင်းတယ်။ ညီမလေး အနှောက်အယှက်တွေကနေလည်းကာကွယ်ပေးတယ် ကိုကို့ကြောင့်ပဲ ညီမလေး ဘယ်သူ့ကိုမှချစ်လို့မရတာ။ အာ… ကိုကို့ဟာကြီးက ညီမလေးဟာလေးကိုထောက်မိနေပြီ….” “အာ…. ဟုတ်သားပဲ ဆောရီး ကိုကို ထလိုက်တော့မယ်” “မထပါနဲ့….လာ ညီမလေးကို နမ်း” ဆိုပြီး ကျွန်တော့ကို ဆွဲဖက်ထားရင်း နမ်းစုပ်နေတော့ ကျွန်တော်လည်း တော်တော်စိတ်ထန်လာပြီး ပြန်နမ်းနေပါတယ်။ “ဖူးဖူးညီမလေး နင့်ကို ကိုကို အရမ်းသဘောကျတယ်တဟာ..အာ့” ဖူးဖူးက အောက်က သူ့ဟာလေးကို အရမ်းကော့ပေးလာပါတယ်။
ကျွန်တော် ပြောနေတုံး ဆက်တိုက် သူ့ဟာလေးကို တည့် ဖိမိနေတော့ ညီမလေးလည်းအသက်ရှုသံလေးတွေမြန်လာပြီး သက်ပြင်းချနေပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့ကို ကြည့်ရင်း “ကိုကို…လုပ်ရအောင်ဟာ….. အား…. ဟင်း…ဟင်း…” ကျွန်တော်ကော သူကော မောင်နှမအရင်းမှန်းသိသိနဲ့ နှစ်ယောက်လုံးစိတ်ရိုင်းတွေဝင်နေတော့ ဘာကိုမှမဆင်ခြင်နိုင်တော့ပဲ မှောင်နှမနှစ်ယောက် စိတ်ရဲ့အမှောင်ထုထဲ တစ်လှမ်းချင်း ဝင်နေမိပါတယ်။ ကျွန်တော့ ညီမလေးဖူးဖူးကို သူလည်း လိုချင်သလို သွေးသားရင်း မှားယွင်းမှုအရသာကို ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ နမ်းနေရင်း အင်္ကျီကို ကြယ်သီးတွေတစ်ခုချင်းဖြုတ်လိုက်ပြီး အကုန်ကုန်သွားတော့ ဖူးဖူးက လက်လျိုပြီး ချွတ်လိုက်ပါတယ်။လက်ကို သူ့ကျောအောက်လျိုသွင်းလိုက်ပြီး ဘရာကို ချွတ်ဖို့ပြင်တော့ သူမငြင်းပါဘူး ခါးတောင်ကော့ပေးလိုက်သေးတယ်။ ညီမလေး နို့လေးတွေက ဖြူဖွေးပြီး လုံးနေတာပဲဗျာ။
ပက်လက်အိပ်နေတာတောင်နို့အုံအလိုက်ဖောင်းနေတယ်။အသည်းယားလာတာနဲ့ နို့သီးခေါင်းထိတ်လေးကို ဆွဲစုပ်တော့ သူက ကော့သွားပြီး ကျွန်တော့ကို သူ့မျက်နှာဆီ ဆွဲတင်ပြီး နှခမ်းကို အတင်းဆွဲစုပ်နေတယ်။ သူ့ နို့လုံးလုံးလေးတွေကို ညှစ်လိုက်တယ် နို့သီခေါင်းလေးတွေ ချေပေးရင်း သူ့နှခမ်းကို ပြန်ဆွဲစုပ်နေတယ်။ ညီမလေး အသက်ရှူသံတွေအရမ်းမြန်လာပြီး သူ့ထမိန်ကို သူ့ဘာသူ ခြေထောက်နဲ့ကန်ချွတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ပုဆိုးကို ချွတ်လိုက်ပြီး သူ့ပေါင်ကြားကို ကိုင်လိုက်တော့ အတွင်းခံမှာ အရည်တွေတော်တော်ရွဲနေပြီ။ ညီမလေးအတွင်းခံကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး သူ့ဟာကို လက်နဲ့ပွတ်ပေးတော့ တွန့်သွားပြီး ညည်းသံလေးတွေထွက်လာတယ် တော်တော်အရှိန်တက်နေပြီပဲ။ ညီမလေးရဲ့ပေါင်ကို ကားလိုက်ပြီး အရည်တွေရွဲနေတဲ့သူ့စဖုတ်လေးကို ကျွန်တော့လီးနဲ့တေ့လိုက်တယ်။ ညီမလေးကက မျက်လုံးမှိတိပြီး ဖက်ထားတယ်။
သူ့နှုတ်ခမ်းကို တအားဆွဲစုပ်လိုက်ပြီး ညီမလေးရဲ့အဖုတ်လေးထဲ သွင်းလိုက်တယ်။ ကြပ်ထုတ်နေတာနဲ့ တစ်ဝက်ပဲ သွင်းပြီး ပြန်ဆွဲထုတ်ရတယ်။ “အာ့ …..အင်း ဟင်း….” ညီမလေးကဆက်တောင်မနမ်းနိုင်တော့ပဲ ပါးစပ်လေးဟပြီး ငြိမ်နေတယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ချော့သွင်းရင်း အဆုံးထိဝင်အောင်သွင်းလိုက်တော့ မျက်နှာလေးရှုံ့မဲ့နေပြီး အင်း ကနဲ့ သက်ပြင်းချသံလေးပါ ထွက်လာတယ်။ ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလိုးနေပြီး သူ မနာတော့တဲ့ပုံပေါ်မှ အရှိန်မြင့်ပြီး ဆက်လိုးတယ်။ ညီမလေး ဖူးဖူး ကအရမ်း ကျေနပ်နေပုံပေါ်နေတယ်။ မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ညည်းနေတဲ့ ညီမလေးးမျက်နှာလေးကိုကြည့်ရင်း ဆက်လိုးနေမိတယ်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းလိုးနေတာ အချက် လေးဆယ်လောက်ရှိတော့ အရှိန်တင်ပြီး အဆုံးထိ ဆောင့်လိုးလိုက်တယ် “အာ့……ဆောင့်…ကိုကို….အား….အား…..” သူ့လက်တွေက တင်းကြပ်နေအောင်ဖက်လာတယ် သူပြီးတော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်တာနဲ့။
ကျွနိတော်လည်း ပြီးဖို့ ပြင်လိုက်ပြီး အမြန်ဆောင့်လိုးလိုက်တယ်။ သူက အားကနဲ့အော်ပြီး တင်းကြပ်စွာဖက်ထားရင်း ခါးကိုပြန်ကော့ပေးလာတယ်။ “အာ့…..အား….ကိုကို….ဆောင့်ဆောင့်….အား……” “အာ့…….ညီမလေး…ကိုပြီးသွားပြီ…….” “အား…ညီမလေးလည်းပြီးသွားပြီ..ကိုကို….” ကျွန်တော် ညီမလေးအပေါ်က ဆင်းလိုက်တော့ သိပ်ပြီး ကျေနပ်ပုံမရသေးတဲ့ ညီငယ်က သူ့စဖုတ်ထဲကပလွတ်ဆိုပြီး ထွက်လာပါတယ်။ ထောင်နေတာ မကျသေးတဲ့အဖြစ် ကိုယ့် ဘာသာကိုယ်တောင်မယုံချင်ဘူး။ ညီမလေးက ဟိုဘက်ကို လှည့်သွားပြီး ကွေးကွေးလေး မှိန်းနေပါတယ်။ တအောင့်လောက်နေတော့ ညီမလေးက ထ ထိုင်လိုက်ပြီး သူ့ကျောင်းဝတ်စုံတွေကို ဖြန့်နေပါတယ်။ “ညီမလေးတော့ ကျောင်းသွားလို့ မဖြစ်တော့ဘူး အင်္ကျီက ချွေးတွေနဲ့ ရစရာမရှိတော့ဘူး” “မသွားနဲ့တော့ ဒီနေ့တစ်နေလုံး ကိုကိုနဲ့အတူနေပေါ့ဟ” ညီမလေးက ကျွန်တော့ကို ပြုံးပြီးတစ်ချက်ကြည့်ရင်း အောက်က ထောင်နေဆဲ အကောင်ကို စိုက်ကြည့်နေပါတယ်။
“ကိုင်ကြည့်လေ ကိုကို့ဟာကို” သူ့လက်နဲ့ ဖွဖွကိုင်တော့ ဂွင်းထုသလို ထုဖို့ သူ့လက်အပေါ် အုပ်ကိုင်ပြီး တစ်ချက်နှစ်ချက်ထုပြလိုက်တော့ သူက အဲ့အတိုင်းဆက်ထုနေတယ်။ “ကိုကို့ဟာက ပြီးသွားတာ တောင် ထောင်နေတုံးလား” “ညီမလေး ပိပိလေးထဲ ဝင်ရထွက်ရတာ မဝသေးလို့ နေမှာပေ့ါ” ညီမလေးကကျွန်တော့စကားကို ရီလိုက်ပြီး ဘေးမှာ လှဲအိပ်လိုက်တော့ သူ့ကို ဖက်ထားရင်း နို့တစ်ဖက်ကို ကိုင်ပြီး ညှစ်နေလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ အမေပြန်မလာခင် ညီမလေးကို ထပ်လိုးချင်သေးတာနဲ့ “ညီမလေး ကိုကို့ကို လေးဘက်ထောက်ပေးပါလား….ညီမလေး ဖင်ကို ကိုင်ပြီး လုပ်ချင်လို့” “အင်း..ကိုကို ဖြေးဖြေးလုပ်နော် ညီမလေးက အတွေ့အကြုံမရှိဘူး” “ငါ့ညီမ အပျိုလေးမှန်းသိပါတယ်…ညီမလေးရဲ့” ညီမလေးလေးဘက်ထောက်လိုက်တော့ အလိုလိုကော့နေတက်တဲ့ သူ့ရဲ့ဖင်လုံးလုံးလေးတွေက အရမ်းကို ကြည့်လို့ လှနေတယ်။ ကျွန်တော့ လီးတံကို ကိုင်ပြီး ညီမလေးအဖုတ်နဲ့တေ့လိုက်ရင်း အထဲကို ဖြေးဖြေးချင်းသွင်းလိုက်တယ်။
“အာ့….” “ညီမလေး… ကိုကို လိုးတော့မယ်နော်” အင်း… ကျွန်တော်အဆုံးထိဖြေးဖြေးချင်းသွင်းရင်း ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီး ပုံမှန်ပဲ ဆွဲနေပါတယ် ညီမလေးဆီကက ရှိုက်သံလေးတွေထွက်လာပြီး “အာ့….ကိုကို….ဆောင့်….ဆောင့်လိုးတော့….ကို့ကိုလီးကြီးက ညီမလေးအထဲမှာ ပြည့်ကျပ်နေတာပဲ…အရမ်းကောင်းတယ်…။” ကျွန်တော်လည်း ညီမလေးအသံကြားတော့ ပို ဖီးဖြစ်လာတာနဲ့ တအားဆောင့်လိုးနေပါတယ်။ တဒုတ်ဒုတ်နဲ့ သူ့ သားအိမ်နဲ့ပါသွားထိတာ ခံစားနေရတယ်။ “အောင့်အောင့်သွားတာပဲ ….အရမ်းကောင်းတယ်ကိုကို….အား….ညီမလေးပြီးတော့မယ်” “ကိုကိုလည်း ပြီးတော့မယ်…..အား…”သူ့နို့လေးတွေလှမ်းဆွဲလိုက်ပြီး တအားဆောင့်လိုးရင်း သူပြီးသွားမှန်း နွေးကနဲ့ခံစားလိုက်ရတော့ ညီမလေး အဖုတ်ထဲကို လရည်တွေသွင်းရင်းပြီးလိုက်တော့တာပေါ့။ အဲ့အချိန်ကစလို့ ဖူးဖူးနဲ့ ကျွန်တော် အရမ်းချစ်တဲ့မောင်နှမတွေ ဖြစ်သွားတာပေါ့ ပုံမှန်ထက်ပိုရင်းနီးလာပြီး မိဘတွေ လစ်ရင်လစ်သလို ပုံစံအစုံ လိုးကြတော့တာ။ ညရောက်ရင် အစ်မဝမ်းကွဲ မအိနဲ့လိုး မနက်ပိုင်းတစ်ချိန်လုံး ညီမလေး ဖူးဖူးနဲ့ လိုးနေတော့တာ အခုချိန်ထိပါပဲဗျာ….ပြီးပြါ